काेराेना नेगेटिभ भन्दै घर पठाएकालाई संक्रमण देखिनु लावरवाही कि हतार ? - NayaMedia:: Naya Media । Leading Nepali News Portal
हतार कि लापरवाही ?
काेराेना नेगेटिभ भन्दै घर पठाएकालाई संक्रमण देखिनु लावरवाही कि हतार ?
सोमवार, बैशाख १, २०७७ (April 13, 2020, 12:35 pm) मा प्रकाशित
घनगढीकी चौथो संक्रमितलाई पनि घर पठाइसकेपछी काेराेना पुष्टी देखिएकाे थियाे
सोमवार, बैशाख १, २०७७, काठमाण्डाै ।
यापिड टेष्टमा नेगेटिभ आएकाे भन्दै घर पठाइएकी कैलाली, लम्किचुहाकी एक महिलामा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण पुष्टि भयाे । याे दाेस्राे घटना हाे, पुर्ण रूपमा ढुक्क नभएरै घर पठाएकाे । यस अघि पनि घनगढीकी चाैथाे संक्रमितलाई यसैगरी संक्रमणकाे लक्षण नदेखिएकाे भन्दै घर पठाइएकाे थियाे र पछी काेराेना पुष्टि भएकाे थियाे ।
आज ६५ वर्षीया महिलामा पीसीआर बिधिबाट गरिएको परीक्षणमा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। तर उनलाई पनि र्‍यापिड टेष्ट किटबाट परीक्षण गर्दा नेगेटिभ देखिएकाे थियाे र उनलाई घर पठाइएकाे थियाे ।
उनी वीरगञ्ज नाकामा चिया बेच्थिन् । उनीसहित १७ जना चैत ९ मा मात्र कैलालीको लम्की पुगेका थिए । स्थानीय जनप्रतिनिधिले सबैलाई लम्की बहुमुखी क्याम्पसको क्वारेन्टाइनमा राखेका थिए । उनीहरूले नेपालबाटै आएका हौं, घरमै बस्छौं भनेका थिए तर जन प्रतिनिधीले हुँदैन भनेर क्वारेन्टाइनमा राखेका थिए ।
तर पीसीआर बिधिबाट गरिएको परीक्षणमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भयाे । अब उनीहरु सबैलाई फेरि क्वारेन्टाइनमा राख्ने तयारी भइरहेको छ ।
कोरोना संक्रमण देखिएन भनेर घर पठाइएको व्यक्तिलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको याे कैलालीको दोस्रो घटना हो । यसअघि चौथो संक्रमितको आफन्तलाई पनि सुरुमा क्वारेन्टाइनमा राखेर कोरोनाको लक्षण नदेखिएको भन्दै घर पठाइएको थियो । तर पछि परीक्षण गर्दा उनमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो । याे हुनु र दाेहाेरिनु निकै जाेखिमपुर्ण हाे । यसरी घर गएका झन ढुक्क साथ घर व्यावहारमा फर्किने सम्भावना हुन्छ । जसकाे चुनाैति कति बढी हाेला ?
याे गल्ती दाेहाेरिनु हुदैन । केही समय थप क्वारेन्टाइनमा राखेर पुर्णरूपमा निर्क्याैल गरेर मात्र घर पठाउनु पर्ने र यसका लागी थप तयारी र हाेसियार गर्नुपर्ने देखिएकाे छ ।